PoEdit nkuzi: otu esi asụgharị oru ngo sọftụwia efu | Site na Linux
Ọ bụrụ na ị na-agụ ihe a, ọ ga-abụrịrị na ị banyeworị n'ọmarịcha eggplant nke ntụgharị. Ekele na ... ndidi. Ihe niile na-amụta na oge na ọchịchọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịsụgharị iji nye onyinye gị nke ájá na ụwa nke software n'efu (ma ọ bụ ịchọrọ ngwa iji tinye nhọrọ asụsụ na weebụsaịtị), na ihe ị tụrụ anya ya bụ ederede doro anya na Bekee (dịka ọmụmaatụ) iji nyefee ya n'asụsụ ọzọ, ị ga-aghọta (dịka m gwara onwe m) na ọ bụghị otú ahụ mfe.
Ma ọ bụghị ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ma. N'okwu ndị a dị nkenke anyị na-anwa ịkọwa okwu kachasị, nke bụ na e kenyere gị a faịlụ na Ọkpụkpọ .otu ịsụgharị.
Nke a bụ onyinye sitere n'aka Daniel Durante, wee bụrụ otu n'ime ndị mmeri nke asọmpi kwa izu anyị: «Kesaa ihe ị maara banyere Linux«. Ekele Daniel!
1 Gịnị bụ PoEdit?
2 Mpempe akwụkwọ ndebiri na faịlụ ntụgharị
3 Mana ịsụgharị site na ndebiri…?
4 Ntinye na nhazi
5 Na-arụ ọrụ na faịlụ .po
6 Gịnị bụ na ajị ajị?
Gịnị bụ PoEdit?
Poedit bụ ngwa ntụgharị asụsụ, mana kpachara anya, ka anyị ghara ịtụgharị ya na onye ntụgharị okwu.
Enwere mmemme ndị ọzọ nwere otu ọrụ mana echere m na PoEdit kacha gbasaa. PoEdit anaghị atụgharị asụsụ dị ka mmemme nke ebumnuche ahụ ga-eme, kama ọ na-enyere anyị aka ịtụgharị asụsụ site n'otu asụsụ gaa n'ọzọ. Nke ahụ bụ, ọ ga-ewetara anyị ụdọ mkpụrụedemede n’asụsụ ma anyị bụ ndị ga-atụgharịrị ha n’asụsụ achọrọ.
Na ụkpụrụ, mmadụ nwere ike ịjụ, maka nke ahụ achọrọ m mmemme? Gini na iji ndị editọ ederede dịka gedit ma ọ bụ windo windo? Azịza ya dị nnọọ mfe: PoEdit na-emepụta mmepụta nke ụdọ a sụgharịrị na usoro a kwadebere iji tinye ya na ndekọ aha nke ihe nkesa na-echekwa peeji ndị dị na html, php code, wdg. nke mere na a ga-amata ya dịka faịlụ ntụgharị ntụgharị ọrụ arụmọrụ ozugbo etinye ya na ndekọ faịlụ ntụgharị. O doro anya na enwere ike (ma na-adịkarị) karịa otu faịlụ na ndekọ aha ndị a kara aka ịchekwa ntụgharị asụsụ gaa n'asụsụ dị iche iche, ebe faịlụ ọ bụla nwere ozi gbasara ihe na otu esi anọchite anya mkpụrụedemede nke ntụgharị asụsụ maka asụsụ enyere.
Faịlụ ndị PoEdit na-ejikwa bụ faịlụ ndebiri, na-ejedebe na ndọtị .pot, faịlụ ntụgharị, na-ejedebe na ndọtị .po na file.mo, bụ faịlụ ndị a chịkọtara na-eme ka ịnweta ha ọsọ ọsọ. A na-ekepụta nke ikpeazụ na akpaghị aka ma ọ bụrụ na anyị kọwaa ya na nhazi PoEdit.
PoEdit dị na nsụgharị maka GNU / Linux, Windows na Mac OS X.
Mpempe akwụkwọ ndebiri na faịlụ ntụgharị
Remember na-echeta otu okwu nhazi okwu si ejikwa ndebiri? Ọfọn, ihe yiri nke a na-eme na PoEdit. Ihe ndebiri template nwere ụdọ a ga-atụgharị na ụfọdụ oghere echekwara maka ụfọdụ data nke ga-emesị jupụta mgbe anyị malitere usoro ntụgharị. Ihe data ndị a, na mgbakwunye na nke mbụ na sụgharịrị ezigbo, bụ, dịka aha onye ntụgharị ikpeazụ (ebe ọ bụ na onye ntụgharị nwere ike ịmalite ọrụ ahụ mana emeghị ka onye ntụgharị ahụ gwụchaa), aha ndị otu ntụgharị ahụ, agwa njirimara , wdg. Ha dị ka ụdị metadata nke na-enye ozi gbasara faịlụ ntụgharị.
Mana ịsụgharị site na ndebiri…?
Naanị mee otu ndebiri ndebiri na faịlụ ọzọ ị ga - edegharị aha n'otu ụzọ ahụ mana yana ndọtị .po Ọfọn, ọ bụghị kpọmkwem n'otu ụzọ ahụ, ebe ọ bụ na ka ị wee mara asụsụ ọ ga - aga
Ọ bụrụ na a ga-atụgharịrị nke izizi, a ga-atụnye koodu ọnụọgụ abụọ na njedebe nke aha faịlụ ndebiri, tupu mgbati.
Ka anyị were were weebụsaịtị na asụsụ bekee. A na-akpọ isi peeji ya index.html, iji sụgharịa ya anyị ga-enwe faịlụ template a na-akpọ index.pot (ntụgharị si index.html ka index.pot bụ usoro ọzọ anyị na-anaghị abanye). Mgbe anyị nwere faịlụ index.pot ahụ, anyị na-edegharị ya aha na index.es.po, ọ bụrụ na Spanish bụ asụsụ nke anyị ga-atụgharị ya.
Ozugbo akpọrọ faịlụ ahụ n'ụzọ ahụ, anyị nwere ike ịmalite ịhazi ya na PoEdit.
Na onyonyo a, ị nwere iberibe nke nkịtị) msgid.
Ọ bụrụ na ajụjụ ahụ ebilite na enweghị m ike idezi faịlụ .po ma tinye nsụgharị ahụ kpọmkwem n'etiti akara akara na-eso msgstr?, Azịza ya bụ Ee, ọ bụ ezie na ọ ka mma ma nwekwa ike ịhazi ya na PoEdit (ịghara ịkọwa na ọ ga-adị mkpa ịbanye aka na ebe ziri ezi na metadata anyị kwurula banyere ya, ọ ka mma ịhapụ ọrụ ahụ na PoEdit; anyị agaghị enwe nhọrọ ịmepe faịlụ .mo chịkọtara).
Na onyonyo ndị a ị nwere nkụnye eji isi mee nke a .po faịlụ ebe metadata gbasara faịlụ ahụ pụtara:
Na faịlụ .pot a metadata agaghị enwe ozi, ebe na .po faịlụ ozi na-ezo aka na ihe ọ bụla ga-apụta.
PoEdit na-abanye na ntinye akwụkwọ GNU / Linux maka Debian 6.0 iduro / isi. Echere m na maka mgbaghara ndị ọzọ na-adabere na ngwugwu .deb, ntinye ha bụ ihe ziri ezi, ma ọ bụ iji ngwa dịka Synaptic ma ọ bụ njikwa njikwa akara dabara adaba, dị ka ndị a:
Mgbe echichi ya, anyị na-enweta usoro ihe omume ma gaa n'ihu ịkọwa mmasị na →dị Mmasị, ebe anyị ga-etinye aha anyị na adreesị ozi-e. Ihe ndị ọzọ anyị nwere ike, n'ụkpụrụ, hapụ ya ka Poedit na-eweta ya.
Na-arụ ọrụ na faịlụ .po
Mbụ anyị hazi faịlụ anyị na Katalọgụ-> Nhọrọ dị ka egosiri na foto ndị a:
Ọ dị mkpa iji jupụta ngalaba ụdị Plural na eriri nplurals = 2; otutu = n! = 1; Ga-etinye ihe ndị ọzọ n'ụzọ ahaziri.
Na nchekwa nchekwa anyị ga-ahọrọ ndekọ na kọmputa anyị ebe anyị chọrọ inwe ntụgharị asụsụ,
Mgbe ịmechara nke a, ị ga - ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepe faịlụ .po na ederede ederede doro anya na meta-data anyị zoro aka agbanweela.
Niile dị njikere ịmalite ịtụgharị ụdọ ndị ga-egosi na ihuenyo PoEdit bụ isi nwere usoro yiri nke a:
Ebee ka anyị tụgharịrị ma tinye na windo dị ala ntụgharị nke eriri na-egosi n'elu. Ọ na-anọgide na-azọpụta mgbanwe.
Gịnị bụ na ajị ajị?
Mgbe anyị edoghị anya maka ntụgharị nke eriri mana anyị maara etu esi eme ntụgharị ya, anyị ga-akara ya dị ka ihe nzuzu. N'okwu a, ntụgharị asụsụ ahụ ezughi ezu ma enwere ike izipu faịlụ .po na onye ntụgharị ọzọ ga-enyocha ụdọ ndị a (n'eziokwu, na usoro nke ọtụtụ ndị ntụgharị na ndị nyocha, a na-enyocha ihe niile)
Ọfọn, dịka njedebe nke obere nkuzi a, m ga-agwa gị na ọhụụ nke ederede zuru ezu, ọ bụghị ahaziri n'usoro dị ka PoEdit gosipụtara, bara uru.
Iji wepu ederede naanị na Spanish anyị ji iwu po2txt:
po2txt -w 75 ederede-aha.es.po isiokwu-name.es.txt
-w 75 gosiputara obosara ahịrị na mkpụrụedemede 75.
(ị ga-enwerịrị ihe ndozi ihe ngwungwu na nsụgharị-arụnyere)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » PoEdit nkuzi: otu esi atụgharị asụsụ ngwanrọ ngwanrọ n'efu
AL poedit m were ya nke ọma, nkọwa dị ezigbo mma mana mgbe m chọrọ iwepụta ederede ọ na-atụfu njehie. M ga-etinye ụzọ faịlụ?
aga ihe m nwetara:
onye ọrụ @ ubuntu: ~ $ po2txt -w 75 English.po English.txt
nhazi 1 faịlụ ...
po2txt: ịdọ aka ná ntị: Njehie nhazi: ndenye English.po, mmepụta English.txt, template Ọ dịghị: [Errno 2] Enweghị faịlụ ma ọ bụ ndekọ dị otú ahụ: 'English.po'
onye ọrụ @ ubuntu: ~ $ po2txt -w 75 ^ Cglish.po English.txt
Zaghachi Pehuén Raineri
Eme Xa dijo
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịchọta sọftụwia weebụ, sọftụwia PC, sọftụwia mkpanaka ma ọ bụ ụdị sọftụwia ọ bụla, m na-akwado ezigbo ngwa ọrụ ngwa ọrụ ngwa ngwa yana amamịghe http://poeditor.com/.
Zaghachi ime Xa
Echere m na m furu efu na akụkụ nke isiokwu mana anaghị m aghọta, gịnị bụ faịlụ ndị a?
Maka ntụgharị asụsụ nke mmemme dị iche iche, mgbe ịchọrọ inye aka ịtụgharị ọrụ na asụsụ ndị ọzọ (dị ka Pidgin, Qcomicbook wdg, wdg) ọkọlọtọ ejiri bụ ụdị faịlụ a n'ihi na maka ebumnuche akọwapụtara n'isiokwu ahụ, ọ na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe .
I meela nke ukwuu maka onyinye gị, ọ na-eme ka ọtụtụ obi abụọ m nwere doo anya, n'ihi na ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ọrụ na-enye ohere ntụgharị asụsụ ozugbo na ịntanetị ma ọ bụ Launchpad dị ka Marlin na-emebu, maka ọtụtụ ndị ka eji usoro .po na mbipụta ya ka edoghị m anya!
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike iji:
E nwere peeji nke na-asụgharị ma Google ma Microsoft n'otu oge:
mmemme dika OmegaT? ọ gaghị arụ ọrụ?
Zaghachi Diego Bruschetti
Ndo maka amaghi ihe m ma achoro m imeputa webusaiti m na asusu di iche ma amaghi m otu esi eme asusu ndi a, ka m kowara:
M nwere ndabara .po na isi asụsụ Spanish (Spain) na m na-eke ọzọ ịsụgharị ya na Bekee en_EN. Ihe m na-amaghị bụ etu m ga-esi lelee ma ntụgharị asụsụ ahụ ebujuru n'ụzọ ziri ezi. Ọ na-ebuba na akpaghị aka dabere na asụsụ nke ihe nchọgharị ndị ọbịa ahụ? Kwesịrị ịmepụta faịlụ dị n'etiti? M ga-etinye ahụkarị ọkọlọtọ na dị ka onye na-enwe, otu translation ma ọ bụ ọzọ na-kwajuru?
Eziokwu n'eziokwu na m dị ọhụrụ na nke a ma na-amalite iji poedit dị ka ịmara ihe niile dị n'okpuru:
Mara: M na-eji poedit na Windows 7 64bits na .po asụsụ (mgbe ị na-eke katalọgụ ọhụrụ) enwetaghị m wedaa. Nanị m tinyere Spanish na Bekee.
Zaghachi nye erknrio
Nnọọ! Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịchọta ụdị sọftụwia ọ bụla, ana m akwado nke ọma ngwa ọrụ ngwa ngwa na kensinammuo: http://poeditor.com/.
M na-eji poedit atụgharị ederede na m ga-achọ ịma etu m ga-esi gụọ mkpụrụedemede ndị m sụgharịrị wee nwee ike ịme akaụntụ iji nakọta ihe atụgharịrị, enweghị m ike ịchọta ụzọ m ga-esi gụọ ọnụ ọgụgụ ndị a sụgharịrị Can. Enwere ike ime nke a?
inwe ike ịme akaụntụ iji nakọta ihe a sụgharịrị?
Echere m na ị chọpụtabeghị nke ọma otu isiokwu si aga, ọ dị mma
gụọ ikike gpl
I nweghi ike ime ya, naanị ihe ga - abụ idetu ahịrịokwu ndị ahụ na onye editọ ederede (onye na - ede akwụkwọ n’ọfịs, okwu, wdg) wee hụ ọnụ ọgụgụ ndị nọ na ahịrịokwu ahụ.
Ọ bụrụ n ’ị ga-atụgharị gaa n’asụsụ ọzọ, ozi gbasara plural na Katalọgụ-Njirimara: Plural Forms windo nwere ike ịchọta na: